Fitsipika momba ny volavolan-dalàna any New Mexico ho an'ireo mpamokatra rongony | 2021 Fahazoan-dàlana
Fitsipika momba ny drafitra ho an'ireo mpamokatra rongony any New Mexico
Tamin'ny 25 may 2021, New Mexico's Cannabis Control Division (CCD) dia namoaka ny volavolan-dalàna mifehy ny fahazoan-dàlana hamokatra mpamokatra rongony. Ny fanehoan-kevitra dia horaisina hatramin'ny talata 29 jona 2021, izay andro nitondran'ny lalàna momba ny lalàna mifehy ny rongony.
Ity ny fampahalalana rehetra ilainao ho fantatra momba ireto fitsipika volavolan-dalàna ireto:
Karazana fahazoan-dàlana havoaka
Ny volavolan-dalàna dia ahafahana manana fahazoan-dàlana roa an'ny mpamokatra:
Microbusinesses mpamokatra rongony
Izahay dia efa nanarona ireo fepetra takiana amin'ny Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana rongony hampiasa olon-dehibe any New Mexico, ary koa ny fomba fanomanana ny tenanao hangataka fahazoan-dàlana mikraoba mikraoba mitambatra. Noho izany, raha mpandraharaha ao New Mexico ianao dia tokony jereo ireo lahatsoratra ireo.
Inona no azonao atao amin'ireo lisansa ireo?
Araka ny HB002:
Ny mpamokatra rongony dia olona na orinasa avela (1) mamboly zavamaniry rongony, (2) manana vokatra rongony mbola tsy voasedra andrana amin'ny laboratoara fitiliana rongony, (3) mitondra ny vokatra rongony tsy voaporofo amin'ny orinasa hafa rongony, na (4) mivarotra ambongadiny ny vokatra rongony. .
Mpanamboatra rongony Microbusinesses dia mpamokatra rongony amin'ny toerana tokana manana fahazoan-dàlana izay manana mihoatra ny roanjato ny zavamaniry rongony matotra amin'ny fotoana iray.
Inona no tsy maintsy ampidirin'ny mpangataka amin'ny fangatahana fahazoan-dàlana?
Araka ny volavolan-dalàna mifehy, ankoatry ny takiana napetraka tamin'ny HB002, ireo no fepetra farafahakeliny tokony ampidirin'ny mpangataka amin'ny alàlana:
Fankatoavana ny fizahana ny tantaram-pirenena momba ny heloka bevava, ary koa ny fanamarinana ny zava-misy manerana ny firenena
Ny famatsian-drano izay ampy amin'ny asa kasaina hatao
Porofo fa ny fantson-drano dia manana habe sy famolavolana sahaza azy, ary apetraka sy voatazona tsara
Porofo fa ny fitaovana fandanjana na fandrefesana rehetra ampiasaina amin'ny ambongadiny rongony dia voarakitra an-tsoratra araka ny tokony ho izy fa efa nanao fisoratana anarana sy fanamarinana voamarina.
Kisary momba ny toerana naroso
Drafitra hampiharana sy hitazomana ny politika sy ny fomba fanao mahazatra araky ny fitsipika napetraka
Fandrefesana ny canopy
Drafitra fitantanana bibikely
Tadidio ny drafitry ny vokatra
Fomba fiasa am-pitoerana
Drafitra fanodinana fako rongony
Fepetra ankapobeny momba ny fiarovana sy ny fahasalamana
Fepetran'ny asa ankapobeny amin'ny fahazoan-dàlana
Voalohany indrindra, ny mpangataka rehetra dia tsy maintsy manaraka ny lalàna misy eto an-toerana sy ny fanjakana, anisan'izany ny zon'olombelona, ​​asa, fananganana, fampiasana rano ary fahazoan-dàlana mazava ho azy.
Ny mpangataka rehetra dia tsy maintsy farafaharatsiny 21 taona, ao anatin'izany ny olona mifehy sy ny mpiasa ao amin'ny orinasa rongony.
Tsy hanaiky ny fangatahana fahazoan-dàlana hiasa ao anatin'ny faritry ny Firenena Indiana, Foko, na Pueblos eken'ny federasiona ny CCD raha tsy nanao fifanarahana ny governemanta foko sy ny sampana.
Voarara ny mivarotra sy mizara amin'ny olona tsy nahazo alalana handray ny vokatra, ary voarara koa ny mihinana rongony na ao amin'ny tranon'ny orinasa.
Tsy mahazo mivarotra zava-pisotro misy alikaola ireo manana fahazoan-dàlana
Ireo manana fahazoan-dàlana dia tsy maintsy mampiseho ny fahazoan-dalany amin'ny toerana miharihary, eo imason'ny besinimaro.
Ny CCD dia afaka mitaky ny mpangataka hampiasa fitaovana sy rindrambaiko ary serivisy voafaritra mazava
Ireo mpitaky fahazoan-dàlana dia mila mitatitra ny tranga halatra na fiarovana rehetra any amin'ny CCD
Ny fananganana dia tokony ho 300 metatra miala ny sekoly sy ny tobim-pitsaboana farafaharatsiny.
Ahoana ny fomba fangatahana fahazoan-dàlana rongony any New Mexico?
Ny rindranasa rehetra dia tsy maintsy fenoina amin'ny alàlan'ny vavahady fampiharana an-tserasera azo alaina ao amin'ny tranokala CCD ary ny fampiharana dia tsy maintsy ahitana ny antsipirian'ny fitaovana rehetra sy ny takelaka takian'ny lalàna sy ny CCD.
Raha misy antony tsy ampidiran'ny mpangataka ny fepetra takiana rehetra, dia hifandray amin'ilay mpangataka ny CCD miaraka amin'ny fanamarihana tsy fahampiana tokony horesahina ao anatin'ny 90 andro, raha tsy voavaha izany dia hakaton'ny CCD ny fangatahana satria tsy feno.
Ankoatr'izay, ny CCD dia mety mangataka amin'ny mpangataka mba hanazava ny fampahalalana voarakitra ao amin'ny fangatahany. Ity fangatahana fampahalalana ity dia mila jerena ao anatin'ny 90 andro aorian'ny daty izay noheverina ho vita, raha tsy izany dia handà ny fahazoan-dàlana ny fizarana.
Farany, ny mpangataka dia afaka manaisotra ny fangatahany amin'ny fotoana rehetra alohan'ny famoahana ny CCD na fandavana fahazoan-dàlana.
Inona no hatao raha manana mari-pahaizana rongony rongony ianao?
Mba hahazoana manan-jo hanohy hamokatra rongony, ny olona manana fahazoan-dàlana araka ny tokony ho izy ary mifanaraka amin'ny lalàna Lynn sy Erin Compassionate Use amin'ny 29 Jona 2021, dia tsy maintsy manolotra fangatahana feno ho an'ny mpamokatra rongony, miaraka amin'ny sarany takiana, ao anatiny 30 andro amin'ny daty mahomby amin'ny lalàna.
Raha tsy manaraka ny lalàna vaovao ny toeram-pitsaboana rongony dia tsy maintsy mijanona avy hatrany ny asany.
Toy ny mahazatra, ny fahazoana fahazoan-dàlana amin'ny indostrian'ny rongony dia tsy asa mora, fepetra takiana ihany ho an'ny fahazoan-dàlana izany, ary misy antsipiriany bebe kokoa izay tsy maintsy raisin'ireo mpangataka rehetra rehefa mangataka fahazoan-dàlana.
Ianao dia afaka mandefa hevitra amin'ny lalàna natolotra farany mandra-pahatongan'ny 29 Jona 2021 amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny tranokala CCD, ary raha manana fanontaniana momba ny fizotran'ny fahazoan-dàlana ianao dia aza misalasala Mifandraisa aminay.
Daza adino ny antsika Sarintany fanamarinana marijuana izay ahafahanao mijery ny satan'ny lalàna ankehitriny any amin'ny fanjakana rehetra any Etazonia ary mahita ny lahatsoratray rehetra amin'ny tsirairay amin'izy ireo.
FIVAVAHANA MISY: FOMBA FANAMPINANA AMIN'NY LICENSE CANNABIS MEXICO BAROTRA FAHASALAMANA
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HANOKAFANA DISPENSARY CANNABIS any MEXICO Vaovao
Tags:Fahazoan-dàlana ho an'ny rongony any New Mexico, Mpanamboatra rongony vaovao any Mexico